Semalt - Awooda Gudbinta SEO
Semalt maanta, waa xalka ugu fiican ee lagu horumarin karo boggaga mashiinka raadinta Google. Adeegyadeena waxaa ka mid ah wax kabadan kicinta SEO kaliya iyada oo loo sii marayo aalado iyo farsamooyin caan ah, waxaan soo saarnay dhowr talaabooyin aan horay loo arag oo lagu guuleysto fulinta mashruuc ganacsi kasta. Si kale haddii loo dhigo, Semalt waa hay'ad suuq-geyn oo dhijitaalka ah oo leh labaatan sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan dhiirrigelinta SEO.
Adeegyadeena waxaa adeegsaday milkiileyaal in kabadan hal milyan oo goobood. Shirkadda waxay shaqaaleysiisaa koox aad u balaaran oo aqoonyahanno ah, iyagoo soo bandhigaya takhasusyo kala duwan: khabiiro SEO ah, khabiiro IT-ga ah, maareeyayaasha iibka, naqshadeeyayaasha websaydhada, qorayaasha qoraalka, luqadaha, iyo xitaa sayidyada hal abuurka. Way iska cadahay in wax waliba ay aad uga sii culus yihiin, sidaa darteed, saameynta ganacsigaaga waxay si toos ah ugu tiirsan tahay iskaashiga lala yeelanayo Semalt.
Waa maxay SEO
Si aad u fahamto mabaadi'da adeegeena, waxaad u baahan tahay inaad fikrad aasaasi ah ka hesho qaybaha SEO iyo sida ay u shaqeeyaan. Aynu eegno tilmaamaha sare. Kordhinta Mashiinka Raadinta ayaa ah tillaabooyin lagu horumarinayo booska websaydhka mashiinka raadinta iyadoo loo adeegsanayo furayaasha. Ujeedada ugu weyn ee dhiirrigelinta SEO waa in macaamiisha loo soo jiito goobta meheradaha raadinta. Hawsha ugu horeysa ee dhiirrigelinta raadinta waa in la siidaayaa waxyaabaha tayada leh si loo sameeyo degel internet ka gaarsiiya jagooyinka ugu sarreeya mashiinka raadinta.
Kordhinta SEO-ga ayaa diiradda saareysa kordhinta taraafikada barta internetka, taas oo ah, kordhinta tirada dadka soo booqda websaydhka halkii waqti. Goobta goobta ee mashiinka baarida ee codsiyada muhiimka ah qaarkood iyo qadarka taraafikada waxay ka dhigan tahay aragtida goobta. Mashiinnada raadinta waxay shaqeeyaan tiro badan oo qiyaasood. Dhanka kale, kobcinta mashiinka baarida waxaa sameeya waxyaabo gudaha ah iyo kuwa dibedda ah.
Qodobbada darajooyinka gudaha waxay si toos ah uga shaqeynayaan websaydhka milkiilaha. Dhiirrigelinta, xaaladdan, waxay ka dhigan tahay hagaajinta astaamaha farsamo ee kheyraadka, sameynta qaab macquul ah, gelinta xiriirrada gudaha, diyaarinta waxyaabaha waxtar leh iyo tayada.
Sababaha darajooyinka dibedda waa kor u qaadista bogga iyada oo loo marayo ilo kale Tallaabada ugu weyni waa in laga helo xiriirro ka yimaada dibedda kuwaas oo kuu horseedi doona bogaggaaga mareegaha.
Sababaha darajooyinka dibedda waa kor u qaadista bogga iyada oo loo marayo ilo kale. Tallaabada ugu horreysa ayaa ah in laga helo xiriirro ka yimaada dibedda kuwaas oo kuu horseedi doona bogaggaaga mareegaha. Hawsha Semalt waa in tixgalinta la siiyaa dhammaan qodobbada isla markaana la helo goleyaal waxqabadyo lagama maarmaan ah iyada oo loo marayo qalab gaar ah. Dheeraad ah, isku dhafka ficiladan ayaa goobta u horseedi doona jagooyinka ugu sareeya. Kuwa doonaya inay ku guuleystaan meheradda marwalba ma laha fahansiin ku filan SEO. Xalka ugu habboon ee loogu talagalay iyaga ayaa ka faa'iideysan doona farsamooyinka Semalt, hufnaanta taas oo lagu xaqiijiyay natiijooyinka muuqda.
Waxa Semalt sameeyo
Meelaha ugu muhiimsan ee takhasuskayadu ka mid yihiin:
vidiyo xayeysiin ah ganacsigaaga;
Si loo dhiirrigeliyo boggaga, Semalt wuxuu abuuray qaabab gaar ah oo uu u arko natiijooyinka ka hor inta uusan maalgelin ganacsi. Khibrad khibrad leh oo ku saabsan warshadaha SEO iyo aqoonta suuqgeynta ayaa u oggolaatay shirkadda inay noqdaan soosaarista xalalka SEO ee istiraatiijiyadda ah, sida AutoSEO, FullSEO. Sahaminta faa'iidooyinka ololahan.
Soo koobid qiimaynta ololahan waxaan ku soo koobi karnaa faa'iidooyinka ugu waaweyn ee laga dheehan karo:
sameynta tixraacyada websaydhyada xiriirka la leh;
Habka AutoSEO waxaa loo fuliyaa sida soo socota: Marka la diiwaangaliyo, falanqeeyaha bogga ayaa soo bandhigi doona warbixin kooban oo ku saabsan qaab dhismeedka websaydhka oo ku xiran heerarka SEO. Macluumaadkan, ayaa isna, ka caawin doona hagaajinta mawqifkaaga Google. Maamulahaaga shakhsi ahaaneed, oo ay weheliyaan la-taliyaha SEO, ayaa sameyn doona dib-u-fiirin dhammaystiran oo ku saabsan websaydhkaaga oo waxay samayn doonaan liis hubinta khaladaadka ay tahay in la hagaajiyo. Injineerka SEO ayaa magacaaba ereyada muhiimka ah si loo dardar geliyo taraafikada websaydhada.
Tikniyoolajiyadda casriga ahi waxay si joogto ah u gelisaa xiriirinta internetka iyo waxa ku jira oo la galiyo ilaha kala duwan ee internetka. Natiijooyin aad u wanaagsan ayaa lagu guuleystaa iyada oo la isku daro dhammaan xiriidhada waxyaabaha ku jira. Semalt wuxuu leeyahay ku dhawaad 70,000 goobood oo tayo sare leh oo ku saabsan mowduucyo badan oo loo qaybiyay si waafaqsan da'da domain. Waxaan si joogto ah ula soconnaa xiriirada iyo mowqifkooda matoorada raadinta. Qeybaha isku xirka waxaa la galiyay saamiga soosocda:
Boqolkiiba 40 - xirmo xiro;
50 boqolkiiba - isku xirnaanta caadiga ah;
Boqolkiiba 10 - xiriirada aqoonsiga summada.
Kadib markaad siiso FTP ama gudiga maamulka CMS, injineerada Semalt waxay sameyaan isbedelo cayiman, oo lagu muujiyey warbixin degel. Wax ka beddellada lagu dhammeystirey websaydhkaaga sababtuna tahay soo-jeedinta falanqeeyayaasheena iyo la-taliyayaasha SEO-ka waxay dammaanad qaadayaan olole wax soo saar leh ee AutoSEO. Semalt wuxuu qabtaa kor u qaadida qiimeynta ee maalinlaha ah oo ay kujiraan ereyo fure aad u badan si ay kugu wargalino horumarka ololaha SEO.
Maamulaha Semalt wuxuu si joogto ah u baaraa hannaanka AutoSEO, isagoo u siinaya milkiilaha goobta emayl ama shaybaar gudaha ah oo ogeysiin ah. Waxaa muhiim ah in la ogaado in qiimaha kor u qaadista mashruucyada oo dhan uu yahay $ 99 bishii. Intii lagu jiray muddada tijaabada, ololaha AutoSEO ee hal mashruuc wuxuu ku kacayaa $ 0.99.
FullSEO waxaa lagu gartaa dhowr ah qaabsocodyada kor u qaadida shabakadda gudaha iyo dibedda oo soo saarta guulo la taaban karo muddo gaaban. Khabiirada takhasuska leh ayaa fulin doona kobcinta gudaha iyo dibadaba, saxaan khaladaadka, iyo waxay qoraan qoraallo sida ku xusan tilmaamaha SEO. Sidaas awgeed, ganacsigaaga internetka ayaa horumar ku gaari lahaa dhowr bilood gudahood. Ololaha FullSEO , saamiga dakhliga maaliyaddu si weyn ayuu u kordhayaa, sidaa darteed soo noqoshada maalgashiga ayaa noqotey wax ka badan 700%.
Bilaabidda ololaha FullSEO waxay kuu oggolaaneysaa inaad doorka ugu sarreeya ka qaadato waaxda suuqa, adoo ka dhigaaya kuwa kula tartamaya kuwo aad u yar. Nidaamkan casriyeynta ee shabakada wuxuu kuu soo gudbin doonaa natiijooyin faa'iido leh isla markaaba. Semalt wuxuu kaa dhigi doonaa mid lagu fahmo macaamiisha mustaqbalka.
Geedi socodka FullSEO
Diiwaangelinta ka dib, nidaamkeena falanqaynta wuxuu bixin doonaa warbixin kooban oo ku saabsan qaab dhismeedka websaydhka kadib markii la raaco heerarka injineernimada SEO. Sidoo kale, maamulahaaga, oo uu weheliyo khabiir SEO ah, wuxuu sameyn doonaa qiimeyn sheeko oo dhameystiran oo ku saabsan boggaaga, qaabeyntiisa, go'aaminta xudunta Semantic.
In kasta oo ay samaynayaan diiwaanka cayayaanka oo ay tahay in la saxo, soo-saaraha SEO ayaa go'aaminaya ereyada muhiimka u ah taraafikada. Websaydhkaagu wuxuu ku dhammaadaa meel-ka-dhigid gudaha ah oo dhammaystiran oo ku saabsan dhammaan marxaladaha lagu soo jeediyey FullSEO. Kadib helitaanka FTP iyo guddiga maamulka CMS, soo-saareyaashayadu waxay sameeyaan wax-ka-beddello loogu talagalay soo-koobidda websaydhkaaga, iyaga oo badbaadinaya dhammaystirka hannaankaaga fullSEO.
Kordhinta dibadda: Xirfadlayaasheena SEO ayaa bilaabaya inay geliyaan xiriiriyeyaal kheyraadka websaydhka sida fiican u wada shaqeeya, ee ku habboon waxyaabaha ka kooban boggaaga. Xiriirimaha la galiyay waxay isugu jiraan waxyaabo gaar ah, sidaa darteed, waxay kuu fududeynayaan inaad gaaraan natiijooyin wanaagsan. Shirkaddu waxay leedahay tiro aad u tiro badan oo la tirin karin oo ah weheliso aad u wanaagsan oo ku baahsan waxyaabo badan oo kala duwan, kuwaas oo si ula-kac ah loogu kala saaray iyadoo la raacayo dhererka domain ee jiritaanka iyo Google Trust Rank.
Dhismaha isku xirka si joogto ah ayaa loo fuliyaa iyadoo ay ugu wacan tahay saamiga:
10 boqolkiiba - xiriiriyeyaasha sumadda sumadda.
Maamulahaaga shakhsi ahaaneed si nidaamsan ayuu u maareeyaa ololahaaga oo qayb ka ah barnaamijka, wuxuu kor u qaadaa liiska darajooyinka ereyada muhiimka ah ee la xayeysiiyay, isagoo kuu keenaya warbixinno gaar ah, oo ka warramaya kobacaaga ololahaaga SEO. Maamulaha ayaa kula soo xiriiraya adiga maalin iyo habeenba.
Haddii ay dhacdo inaad joojiso dallacsiinta SEO, dhammaan xiriiriyaasha dib ayaa loo tirtiri doonaa, Google-na waxay ka soo saari doontaa keydka macluumaadka dhowr bilood gudahood. In kasta oo darajooyinka la kasbaday ay si is daba joog ah u dhici doonaan, si kastaba, way ka sarreyn doonaan wixii kahoreeyay SEO. Xayeysiinta SEO ee degel kasta waxay u baahan tahay qaab shaqsiyeed. Qiimaha ugu dambeysa ayaa la meelaynayaa ka dib markii khabiir SEO ah baaro bartaada iyadoo laga caawinayo maareeyaha Semalt.
Semalt sidoo kale wuxuu sameeyaa falanqaynta shabakadda. Waa nidaam falanqayn habeysan oo soo bandhigaya fursado cusub oo lagula socdo suuqa. Xaqiiqdi waxay awood u siineysaa dadka isticmaala inay raadraacaan jagooyinka tartamayaasha iyagoo siinaya macluumaad ganacsi oo falanqeyn ah. In kasta oo aad la socoto xaaladda degelka, waxay kuu suurtagelineysaa inaad soo jeediso aragti cad oo ku saabsan mowqifkaaga ganacsi ee ka dhex jira suuqa. Macluumaadka falanqaynta ayaa suurtogal ka dhigaya in lagu muujiyo faahfaahinta muhiimka ah ee shaqadaada soo socota oo aad ka buuxiso bartaada waxyaabaha ku saleysan ereyada muhiimka ah, xiriiriyeyaasha iibsashada / isweydaarsiga, iyo ereyada muhiimka ah ee habboon.
Falanqaynta Semalt wuxuu kuu sheegayaa dhammaan xaqiiqooyinka ku saabsan booskaaga tartamayaasha suuqa. Isticmaalka wax ku oolka ah ee xogtan ayaa kuu oggolaanaya inaad ku guuleysato baaritaanka kobcinta, socodsiinta ololahaaga ganacsi. Macluumaadka laga helo falanqaynta ganacsiga ayaa muujinaya suurtogalnimada cusub ee alaabta iyo adeegyada la siinayo, waxaa intaa dheer inay horumarin ku sameyneysaa magacyo kala duwan oo gobollada ah, iyada oo la tixgalinayo dhammaan astaamaha gobolka.
Falanqaynta waxaa lagu soo koobi karaa:
Sidee Semalt Analytics Analytics u shaqeeyaa
Isla marka aad iska qorto websaydhkaaga, waxaad bilaabeysaa habka aruurinta xogta wax lagu weydiinayo waxaadna heli doontaa warbixin faahfaahsan oo muujineysa booskaaga internetka iyo sidoo kale booska tartamayaashaada. Warbixinta ayaa sidoo kale ku jirta tilmaamaha ku saabsan dhismaha websaydhka iyadoo la raacayo heerarka SEO.
Kuwa horey u haystay koonto ayaa ku dari kara bog kale shabakad khaas ah, si la mid ahna nidaamka ayaa falanqayn doona. In kasta oo goobta la falanqeynayo, nidaamkayagu wuxuu bixiyaa iibinta ereyada furaha ee ku saleysan xogta laga soo qaaday falanqaynta. Furayaashaani waxay saameyn ku yeelan doonaan kororka imaanshaha goobta. Waxaad ku dari kartaa ama tirtiri kartaa ereyada kale ee furaha ah sida doorbidista.
Waxaan falanqeynaa qiimeynta websaydhada waxaanna la soconnaa horumarkooda 24-saac maalintii. Intaas waxaa sii dheer, waxaan aruurinaa macluumaad ku saabsan tartamayaashaada. Semalt xilli kasta wuxuu cusbooneysiiyaa booskaaga bogga, sidaas darteed wuxuu ku siinayaa albaabka ugu dambeeya ee lagu hubiyo goobta websaydhku markasta oo aad jeceshahay. Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa Codsiga Barnaamijka Borograamka Programming Interface (API). Tani waa wax la doorbidi karo maxaa yeelay xogtu si otomaatig ayey u shaqaysaa, taasoo u suuragelinaysa dadka isticmaala inay daawadaan macluumaadka la cusboonaysiiyay. Muuqaal joogto ah u cusbooneysiiso xogta falanqaynta ee isha aad doorato.
Qiimaha falanqaynta waxay kuxirantahay sicirka la doortey, fiiri qeybtayaga canshuuraha ee hoosta:
Fiidiyowga xayeysiinta ah
Iyada oo qayb ka ah barnaamijka kobcinta SEO-ga, shirkadayadu waxay bixisaa fiidiyowyo khaas ah oo macaamiisha ganacsiga ku mashquuliya. Faahfaahin Fiidiyowga waxaa ku jira muuqaallo aad u wanaagsan oo laga helo waxqabadka shirkaddaaga oo tilmaamaya faa'iidooyinka muhiimka ah ee kaashanaya adiga.
Khabiirada kooxda Semalt waxay si fiican ugu diyaarsan yihiin howlaha ugu adag. Kulligood waxay ku wada hadli karaan luqado kaladuwan waxayna sameyn karaan la tashiyo waxtar leh. Qiimaynta hufnaanta Semalt waxaa lagu soo bandhigay dib u eegista badan ee wanaagsan ee macaamiisheena. Annaga oo nala shaqeynaya, fursadaha guusha ayaa ku dhow boqol boqolkiiba, ugu dambeyntii, Semalt wuxuu noqon doonaa ishaaga lacagaha aan dhammaadka lahayn. Guushaadu waxay ka tarjumaysaa guusheena!